China STEEL Complex PANEL mveliso kunye nabathengisi | Alucosun
IPHANELELA YENDLELA YENTSIMBI
Iphaneli edityanisiweyo yentsimbi engenanto inamaphepha amabini esinyithi yesanti engenasici isiseko esomeleleyo sezinto ze-thermoplastic ezikhutshiweyo ezenziwa kwinkqubo eqhubekayo kungasetyenziswa glues okanye izinto zokuncamathelisa phakathi kwezinto ezingafaniyo. Isiseko asiyi kubakho i-voids kunye / okanye izithuba zomoya kwaye aziqulathanga zixhobo zokugquma amagwebu. Ubophelelo phakathi kombindi kunye nolusu luya kuba ngumanyano lweekhemikhali.
I-Q235B, i-Q345R, i-20R kunye nezinye iarbon zentsimbi kunye nentsimbi ekhethekileyo inokusetyenziswa njengezinto ezisisiseko zentsimbi enamatye yentsimbi. Izinto zokubopha zingenziwa nge-304, 316L, 1Cr13 kunye ne-stainless steel stainless. Izinto kunye nobukhulu bunokudityaniswa ngokukhululekileyo ukuhlangabezana neemfuno zabasebenzisi ezahlukeneyo. Ipleyiti yentsimbi engenantsimbi inombala wokumelana nje nentsimbi engenasici, kodwa ikwanamandla okumatshini kunye nokusebenza kwentsimbi yekhabhoni, eyimveliso entsha yemizi-mveliso. Ipleyiti yesinyithi egqume intsimbi iye yasetyenziswa ngokubanzi kwi-petroleum, kwishishini leekhemikhali, kushishino lweetyuwa, kulondolozo lwamanzi nakwicandelo lamandla ombane. Njengemveliso yokonga izixhobo, ipleyiti yesinyithi egqunywe ngentsimbi inokunciphisa ukusetyenziswa kwesinyithi esinexabiso kunye nokunciphisa kakhulu iindleko zeprojekthi. Indibaniselwano egqibeleleyo yexabiso eliphantsi kunye nokusebenza okuphezulu kunezibonelelo ezilungileyo zentlalo.
(1) Flatness: I-SCP inobucwebe obugqwesileyo obuvela kwinkqubo yokuqhubeka kokulaminetha.
(2) Rigidity: Njengenye yeempawu zeepaneli ezidityanisiweyo, i-SCP ingqine kwaye ayisindi. I-SCM 4mm ilingana ne-stainless steel 2.9mm ubukhulu kwi-rigidity, kwaye inciphisa ubunzima ngama-55%.
(3) Ukuxhathisa umhlwa: NSSC 220M / # 316 / # 304, kunye neMo, Nb, imixholo ye-Ti, ine-anti-rust-resistant.
(4) Ukumelana nomlilo: Isiseko sinemixholo efanayo ne-BOLLIYA SCP, kwaye i-SCP inemvume yomlilo yokusetyenziswa kwangaphandle kwangaphakathi e-China kwaye yahlangabezana nomgangatho wamazwe aphesheya njenge-BS / ASTM.
Iphepha lesinyithi elihombisayo
I-1000 * 2000mm, 1219 * 2438mm, 1219 * 3048mm, ububanzi obuhleliweyo be-1500mm
201, 304, 304L, 316, 316L, 430 njl njl.
Hayi4. I-hairline, Mirror, i-Etched, i-PVDColor, i-Embossed, iVibration
Igolide, iRoss yeGolide, igolide yeChampagne, iCopper, iBronze, Mnyama, Luhlaza, noMfusa, Luhlaza.
Egqithileyo I-ALUMUMUM IPHANI YOMBUSO
Okulandelayo: Aluminium camera Ikhoyili
Iphaneli edityanisiweyo yentsimbi